Aza manao virjiny adala amin’ity tolona ity ! – MyDago.com aime Madagascar
Magro Behoririka 03 Martsa 11
Kamiao enina feno miaramila no nanodidina ny Magro Behoririka androany ary tsy latsaka ny efatra ny 4×4 mivezivezy teo, nanontany tena ny maro amin’ny tsy fandriam-pahalemana manjaka eto Madagasikara kanefa asain’ny FAT mitanin’andro fotsiny ireto « mpiasam-bahoaka » manao fanamiana ireto.
Ingahy Raveloson Constant dia nampatsiahy ilay andro lehibe omaly, « rehefa andro lehibe toy ireny dia tokony ho tonga daholo hoy izy fa tsy hanao virjiny adala amin’ity tolona ity ». Ilain’ny vahoaka ny fanatrehan’ny filoha roalahy ny dinika rehetra ary harovan’ny firenena mikambana ny fiverenany eto hoy Raveloson Constant.
Mazava ny tenin’ny Pr Zafy omaly hoy izy, ny FIS sy ny milisin’i Ramaroson dia aleo miaraka amin’i Andry, tahaka izay kao ny tafika tia vola, ny ambony rehetra mijanona ho mpanelanelana. Mpitondra lany daty i Rajoelina ary tsy misy manakana antsika hanangana tetezamita tena izy hoy izy.
Ny solombavambahoaka Leriva Manahirana dia nandray ohatra amin’ny soratra masina mahakasika ny toe-draharaha eto amintsika : betsaka ny nihitsana rehefa nakany Kanana ny zanak’Israely hoy izy, efa nitsangana ny Mosesy vaovao ary manana ny heviny hitondrana ny firenenan’ny Tompo. Izao fanjakana mandainga, makahala, mangalatra izao ve dia ho sitraky ny Tompo ? Tsy afaka miray petsapetsa amin’ny ratsy isika hoy ny depioté Leriva ary tsy maintsy tonga any Kanana isika.
Ny filoha nasionalin’ny Teza, Jean Louis Rakotoamboa dia nilaza fa tsy hiteraka fitoniana, fandrosoana hoan’i Madagasikara iny tondro zotran’I Dr Simao iny fa ho krizy miverimberina no haterak’iny hoy izy, na tiana na tsy tian’i Rajoelina dia tsy maintsy hisy io tetezamita iraisana io hoy hatrany ny kabariny.
Ny mpandaha-teny rehetra teto an-kianja moa dia samy nampiomana ny mpiara-mitolona rehetra amin’ilay diabe hatao tsy ho ela.
Tolona tsy omby tratra !
Photos Magro Behoririka 02/02/2011
Magro Behoririka, mitohy ny tolona !
Auteur Solo RazafyPublié le 3 mars 2011 Catégories Magro, Malagasy, Militaires, PolitiqueÉtiquettes Albert Zafy, Constant Raveloson
3 pensées sur “Aza manao virjiny adala amin’ity tolona ity !”
4 mars 2011 à 2 h 48 min
Efa vonona izahay e!….Ny tena fanirianay aza dia amin’ny fotoana tena maha betsaka ny olona iny rehefa tsy miasa (ohatra ny Asabotsy), ary atao « publicité » amin’ny gazety toy ny teny ivato mihitsy izy io!…. Tena atao ho ren’ny malagasy rehetra mba ahafahany miroso!.. Dia mba atao masaka tsara tsy toy ny teo aloha intsony!
TSY MAINTSY TONGA NY FAHAFAHANA!
Zay de vonona ny hiandry ilay 1 andro an’Andriamanitra fa efa hotapitra zao ny 99 nomen’ny devoly an’ny foza.
AH! AH! AH! DIAKELY MIAMPY RODOKELY DIA NAMAN’NY TSY MISY E!
Précédent Article précédent : Madagasikara, à contre sens !
Suivant Article suivant : Malok’ila ny fiainan’i Andry Rajoelina !